कसरी खोजशब्दहरूसँग अमेजन बिक्रेता केन्द्रीय भरिएको छ सही तरीका?
अरू केहि गर्नु अघि, आइपुग्नुहोला, यो अमेजनमा खोजशब्द र खोज शब्द अप्टिमाइजेसन धेरै फरक छ भने Google मा जस्तै कुनै पनि प्रमुख खोज इन्जिन जस्तै. मेरो मतलब, उदाहरणका लागि, तपाईले धेरै उत्पादन सम्बन्धी खोजशब्दहरू र लामो-पछाडि खोजी सर्तहरू समावेश गर्न आवश्यक छ - सीधा तपाईंको उत्पाद पृष्ठको विशेष भागहरूमा अमेजन बिक्रेता केन्द्रीय ब्याकइन्ड किबोर्ड शब्दहरू. तपाईँको वस्तु / उत्पादन कोटिसँग सम्बद्ध सबै किवर्डहरू राख्न यो राम्रो स्थान हो, तर अझै पनि आफ्नो उत्पादन शीर्षकमा, वा बुलेट प्वाइन्टहरूको उदाहरणको लागि खोजी गर्न असफल भयो।.
तपाईंको अमेजन विक्रेता केन्द्रीय कुञ्जीपाटी खण्ड पनि एक फरक स्थान हो कि विभिन्न कीवर्ड विविधताहरु को उपयोग गर्ने को लागी कभी पनि कुनै पनि दृश्य एकीकरण को लागी के गरेन (उदाहरण को लागि, साधारण मिस्केलिंग जो किशब्दहरु हो आफ्नै बाटोमा, कोलोकली समीकरण, LSI संयोजन, आदि. ) - xerodent toothpaste ingredients.
अमेजन बिक्रेता सेन्ट्रल बैकेंड खोजशब्द
नोट, कि 2017 को सुरुवात देखि अमेजन बिक्रेता विक्रेता को मुख्य फील्ड्स को मुख्य क्षेत्रहरु केवल 250 अक्षरहरु द्वारा अनुक्रमित गरिन्छ।. यसको मतलब अमेजनमा हरेक ठूलो-पटक बिक्रेता सक्रिय हुन अनिवार्य छ कि सबै समयको साथमा सबै आवश्यक अनुयायीहरू संग सम्भव छ।. त्यसकारण म तल तपाईं तपाईंलाई संक्षिप्त विवरणहरू र तपाईंको अमेजन बिक्रेता केन्द्रीय ब्याकइन्ड किवर्ड शब्दको सेक्शनमा उपयोगी चालहरू देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ. यसलाई समायोजन गर्दा निम्न विचारहरू र विवरणहरू विचार गर्नुहोस्:
तपाईंको लक्षित कुञ्जीपाटीहरूको मुख्य सूची लिनुहोस् र उनीहरूको महत्त्वको क्रममा प्रत्येक संयोजनलाई प्राथमिकता दिनुहोस्।. त्यो तरिका, नोट, तथापि, कि कुनै पनि खोजशब्द दोहोर्याउन को लागी आवश्यकता छैन - केवल किनभने अमेजनले लामो-पूरै खोज अभिव्यक्तिको फरक संयोजनलाई पूर्वनिर्धारित रूपमा पाँच मुख्य ब्याकइण्ड फिल्डमा राख्दछ।.
प्रत्येक प्रत्येक पाँच क्षेत्रहरु को लागी धेरै अलग अलग अद्वितीय कुंजीशब्दहरु को दर्ज गर्न को प्रयास गर्नुहोस. फेरि एकपटक - यो कुनै पनि कुञ्जी शब्द बारम्बार प्रयोग गर्न आवश्यक छैन. तपाइँ त्यो सीमित ठाउँ अझ बुद्धिमानी देखि प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ.
तपाईमा अमेरीका विक्रेता केन्द्रिय ब्याकइन्ड कुञ्जीपाटीका सेक्शनहरू बचत गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्. याद गर्नुहोस्, केहि क्यारेक्टरहरू काटिएका छन्, तपाइँ कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण नयाँ खोज शब्द थप्न सक्नुहुनेछ.
हाइफन गरिएका कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेर कुनै पनि दोहोरिने कार्यहरू पनि छोड्नुपर्छ. ध्यान दिनुहोस कि यदि अमेज़न को ए99 खोज रैंकिंग एल्गोरिदम हो, तो दृश्य देखि, थोडा हाइफन संग जुडे केवल दुई शब्द पहिले देखि नै सबै सम्भावित व्यक्तिगत शब्दहरु र शब्द संयोजन को कवर गर्दै छन्।. एउटै नियम माथिल्लो र सानो अक्षरका लागि होईन, शब्दहरू भर्नुहोस् / शब्दहरू, विस्मयादिबोधक बिन्दुहरू (निश्चित गर्नुहोस् कि तिनीहरू सबै लागतमा टाढा रहन्छन्!).
हरेक कुञ्जी शब्द वा लामो-पूज वाक्यांश एकल स्पेसको साथ मात्र अलग हुनुपर्छ. मेरो मतलब अल्पसंख्यक आवश्यक छैन, तपाईं राम्रो हुन चाहानुहुन्छ कि त्यो मूल्यवान पात्र स्थान लिन सकौं.
सबै पछि, तपाइँले तपाइँको Amazon बिक्रेता केन्द्रीय बैकइन्ड खोजशब्द सेक्सनमा सम्पूर्ण स्पेस प्रयोग गर्नुहोला. त्यस तरिका, कुनै पनि सानो प्रासंगिकताको कुनै पनि कुञ्जी सहित कुनै पनि ठाउँमा सबै चीज गर्न डबल जाँच गर्न नबिर्सनुहोस्.